"Khudbadii Madaxweyne Farmaajo wax nuxur ah malaheen" | KEYDMEDIA ONLINE
“Khudbadii Madaxweyne Farmaajo wax nuxur ah malaheen”
Xildhibaan Mahad Salaad oo kamida Xildhibaanada Golaha Shacabka BJFS ayaa weerar afka ah ku qaaday Madaxweyne Farmaajo, isagoo ku tilmaamay khudbadiisii maanta mid aan nuxur lahayn.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xildhibaan Mahad Salaad oo kamida xildhibaabanada ugu saameynta badan Xildhibaanada Golaha Shacabka BJFS ayaa isagoo la hadlaya warbaahinta gudaha ku tilmaamay khudbadii uu madaxweynuhu ka jeediyay fadhigii maanta ee Golaha Shacabka mid aan macno iyo miisaan badan lahayn.
"Madaxweynaha khudbadiisa wax nuxura oo ku dhex jiray, oo aan dhihi karo madaxweyne Soomaaliyeed ayaa Gole Baarlaman inta horyimaado ayuu umadda Soomaaliyeed iyo Xildhibaanadii matalayay shacabka ayuu u sheegi doonaa, wax la filayay oo madaxweynaha wey ka suurowdaa aan isdhihi karnay maaheen" ayuu yiri Xildhibaanka oo aad ula yaabanaa saluugsanaana khudbadii jiitanka badneed ee uu madaxweynuhu ka akhrinayay waraaqaha iyo Mobile ka hoostiisa yaalay.
Madaxweynaha ayaa warbixin ka siinayay Golaha Shacabka ee Baarlamanka Shirkii Dhuusamareeb 4 oo guul darro kusoo dhammaaday sida madaxweynuhu qirtay, inkastoo eedda fashilka ku yimid shirka uu u celiyay madaxweynayaashii kaga aragtida duwanaa arrimaha doorashooyinka iyo waxa uu ugu yeeray gacmo shisheeyo oo uu diiday in uu magacaabo.
"Madaxweyne Farmaasho ayaa qirtay inuu ku fashilmay qabashada doorashadii laga sugayay inuu qabto" ayuu kusoo gabagabeeyay hadalkiisa Xildhibaan Mahad Salaad.